Tani waxay noqon doontaa wax laga xumaado. Toddobaad ma dhaafo oo ma haysto shirkado i weydiiya inta aan ka qaadno a website cusub. Su'aasha lafteeda ayaa kor u qaadeysa calan gaduudan oo fool xun oo sida caadiga ah macnaheedu yahay inay waqti lumis ii tahay inaan u raaco macmiil ahaan. Waayo? Sababtoo ah waxay u eegayaan degel ahaan mashruuc guurto ah oo leh bilow iyo dhammaad. Maaha…
Aan ku bilowno sababta aad xitaa u leedahay degel aad ku bilowdo. Websaydhku waa qayb aad muhiim u ah guud ahaan joogitaanka digital meesha sumcaddaadu ku dhisan tahay oo aad siin karto macluumaad aad loogu baahan yahay macaamiisha iman karta. Meherad kasta, joogitaankooda dhijitaalka ah maahan kaliya mareegtooda… waxaa ka mid ah:
Goobaha Tusaha - miyay ka soo muuqdaan baraha ay dadku ka raadinayaan badeecadooda ama adeeggooda? Waxaa laga yaabaa inay tahay Angi, Yelp, ama tusayaal kale oo tayo leh.
Search matoorada -Iibsadayaashu waxay si firfircoon internetka uga raadinayaan macluumaad si ay uga caawiyaan habka go'aan-qaadashada. Ma joogtaa meesha ay raadinayaan? Ma haysaa maktabadda taasi si joogto ah ayay u socotaa?
Isu -duwidda joogitaankaaga dhijitaalka ah ee dhexdhexaad kasta iyo kanaal kasta waa lama huraan maalmahan aad bayna uga baxsan tahay dhisidda bogga cusub.
Websaydhkaagu weligiis maahan soo gabagabeeyay. Waayo? Sababtoo ah warshadaha aad ka shaqayso ayaa is -beddel ku socda. Lahaanshaha mareegtu waxay lamid tahay markab aad leedahay oo aad kula socoto biyaha furan. Waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah ula qabsato xaaladaha - ha ahaato tartamayaasha, iibsadayaasha, algorithms -ka mashiinka raadinta, teknolojiyadda soo ifbaxaya, ama xitaa badeecadahaaga iyo adeegyadaada cusub. Waa inaad sii wadaa hagaajinta badhankaaga si aad ugu guulaysato soo jiidashada, wargelinta, iyo beddelidda booqdayaasha.
Ma u baahan tahay isbarbar dhig kale? Waa sida inaad qof weydiiso, “Immisa ayey ku kacaysaa in caafimaad la helo?”Helitaanka caafimaadku waxay u baahan tahay cunno caafimaad leh, jimicsi, iyo dhisidda dardar waqti ka dib. Mararka qaarkood waxaa jira dib u dhacyo leh dhaawacyo. Mararka qaarkood waxaa jira jirrooyin. Laakiin helitaanka caafimaadku ma laha yool dhammaad ah, waxay u baahan tahay dayactir joogto ah iyo hagaajin markaan weyneyno.
Shaacbaxaya Technologies - iyadoo farsamooyin cusub la filayo, miyaad hirgelinaysaa? Soo-booqdaha mareegaha ee maanta wuxuu leeyahay filashooyin aad u kala fog, oo doonaya inuu iskiis u adeego. Mid ka mid ah tusaalaha weyn waa jadwalka ballanta.
Wax kasta oo wakaalad suuqgeyn ah ama xirfadle ah oo aad shaqaaleysiiso waa in ay aad uga warqabtaa warshadahaaga, tartankaaga, kala duwanaanshahaaga, badeecadahaaga iyo adeegyadaada, astaantaada, iyo istaraatiijiyadaada isgaarsiinta. Maaha inay si fudud u jeesjeesaan naqshad kadibna qiimeeyaan hirgelinta naqshadaas. Haddii intaas uun ay samaynayaan, waa inaad heshaa lamaane suuqgeyn cusub oo aad la shaqayso.
Websaydhkaagu waa isku-darka teknolojiyadda, qaabeynta, hijrada, isku-dhafka, iyo - dabcan - waxyaabaha aad ka kooban tahay. Maalinta aad website cusub is live ma aha dhammaadka mashruucaaga suuqgeynta dhijitaalka ah, waa macno ahaan Maalinta 1aad ee dhisitaanka joogitaanka suuqgeynta dhijitaalka oo ka wanaagsan. Waa inaad la shaqaysaa lammaane kaa caawinaya inaad aqoonsato qorshaha guud ee hawl -gelinta, mudnaan siinta marxalad kasta, iyo caawinta fulinta arrintaas.
Hadday taasi tahay olole xayaysiis, samaynta istaraatijiyad fiidyow, khariidaynta safarada macmiilka, ama naqshadaynta bogga soo degitaanka… Taladaydu waxay noqon doontaa in la tuuro miisaaniyadda websaydhkaaga, taa beddelkeeda, la go'aamiyo maalgashiga aad rabto inaad sameyso bil kasta si aad u sii waddo fulinta istiraatiijiyadda suuqgeynta dhijitaalka ah.
Haa, dhisida a website cusub waxay qayb ka noqon kartaa istiraatiijiyaddaas guud, laakiin waa geedi socod horumarineed oo joogto ah… ma aha mashruuc ay tahay in la dhammaystiro.